कोरोना लागेकालाई ५ देखि १० दिनको समय 'क्रिटिकल' :: Setopati
सेतोपाटी काठमाडौं, वैशाख २०
शरीरमा अक्सिजनको मात्र नाप्न प्रयोग गरिने अक्सिमिटर। तस्बिर स्रोत: न्यूयोर्क टाइम्स
सातौं दिन पासा पल्टियो। ज्वरो र रुघाखोकी केही नभए पनि 'अक्सिमिटर' ले सामान्यभन्दा कम आँकडा देखायो। यसबीच आफू तंग्रिन थाले पनि उनले आफ्नो औंलामा अक्सिमिटर च्यापेर शरीरको अक्सिजन मात्रा नाप्न छाडेका थिएनन्। यही उनका लागि सबभन्दा हितकर साबित भयो।
रिपोर्ट भन्छ, 'प्रारम्भिक लक्षण देखिएको केही दिनपछि बिरामीको अवस्था सामान्य हुनसक्छ। कतिपय बिरामी पहिलेभन्दा तंग्रिएका छन्। तर, यसको मतलब बिरामी कोरोनामुक्त भयो भन्ने होइन। दोस्रो सातामा प्रवेश गरेपछि बिरामी एकाएक थला पर्न सक्छ, ऊ चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्नसक्छ।'
रिपोर्टअनुसार, कोभिड–१९ मा पहिलो लक्षण देखिएको पाँचदेखि १० दिनसम्मको अवधि एकदमै 'क्रिटिकल' हुन्छ। यो समय बिरामीलाई निको भएजस्तो देखिए पनि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घटेर जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको हुनसक्छ।
'खासगरी वृद्धावस्थाका बिरामी र उच्च रक्तचाप, मोटोपना धेरै भएका वा मधुमेहका बिरामीमा त पाँचदेखि १० दिनको समय झनै चुनौतीपूर्ण हुन्छ,' अल्बर्टा विश्वविद्यालयका सरूवारोग विशेषज्ञ डा. इलान स्वार्जलाई उद्धृत गर्दै न्यूयोर्क टाइम्स लेख्छ, 'युवा उमेरका बिरामीमा पनि पाँचौं दिनपछि समस्याले गम्भीर रूप लिएको पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा १० देखि १२ दिनसम्म नै कठिन हुनसक्छ।'
'जुन बिरामीले कुनै चिन्ताजनक लक्षणबिना १४ दिन कटाउँछन्, उसले कोभिडको जोखिमबाट पार पाउने सम्भावना बढी हुन्छ,' न्यूयोर्क टाइम्समा उल्लेख छ।
'अरू रोगमा एक साता बिरामी परेपछि अब ठिक भयो, अब सुधार होला भन्ने लाग्नसक्छ, तर कोभिडमा त्यस्तो हुँदैन,' डा. होर्विजले न्यूयोर्क टाइम्ससँग भनिन्, 'यसमा एक सातापछि फेरि लक्षण चर्को भएर बिरामी चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्नसक्छ। त्यसैले, लक्षण देखिएको पहिलो साताको अन्त्य र त्यसपछि दोस्रो सातामा बिरामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। लक्षण छैन भन्दैमा कोभिडबाट निको भएँ भनेर ढुक्क हुनु हुँदैन।'
'बिरामीको स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ कि अझ खराब हुँदै जान्छ भन्ने कुरा ८ देखि १२ दिनमा प्रस्ट हुन्छ,' माउन्ट सिनाइ नेशनल जुइस हेल्थ रेस्पिरेटरी इन्स्टिच्यूटका निर्देशक डा. चार्ल्स ए पाओललाई उद्धृत गर्दै न्यूयोर्क टाइम्स लेख्छ, 'पहिला सुधारोन्मुख देखिएका बिरामी पनि ८ देखि १२ दिनमा गम्भीर अवस्थामा पुगेका छन्। यो बेला अक्सिजनको मात्रा कम हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने र खोकी बढ्दै जाने समस्या देखिन सक्छ।'
'नियमित अक्सिमिटर प्रयोग गरेर बिरामीको अवस्था जाँच्ने हो भने कुन बेला अस्पताल पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। अन्यथा, घरमै राखेर डाक्टरको परामर्शमा उपचार गर्न सकिन्छ,' डा. पाओलले भने।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २१, २०७८, ०६:२४:००